Owe-Hip Hop uzokhipha ingoma | News24
Owe-Hip Hop uzokhipha ingoma
ISITHOMBE: sithunyelweUXolani Sithole nowaziwa ngo ‘Yung Ex’.
UMCULI we-Hip Hop waseMbali uXolani Sithole nowaziwa ngo “Yung Ex” uzokhipha ingoma yakhe yokuqala ngqa.
Le ngoma esihloko sithi All My Day’ izophume ekupheleni kwenyanga kaNdasa (March).
USithole (23) uthe into emenze ukuba abhale lengoma ingoba ufuna ukukhuthaza abantu abasha ukuthi bazimisele kuyona yonke into abayenzayo ukuze bezophumelela.
Uthe kumuthathe isikhathi esingangesonto ukuba ayibhale yonke lengoma ayiqede.
“Ngijabulile kakhulu ukuthi nami ekugcineni ngikwazi ukuthi ngikhiphe ingoma yami yokuqala.Okungijabulisa kakhulu ukuthi isizokwazi ukuthi idlalwe nasemisakazweni ngoba ngiyibhalisile ngokusemthethweni. Ngiyathemba ukuthi abantu kanye nabalandeli bami bazoyijabulela baphinde bayithande futhi.
“Ngalengoma ngifuna ukuthi ngisho umuntu eyilalele okanye uma eyicabanga akhumbule ukuthi kungani enza loko akwenzayo okuhle ukuthi ezokwenza ngokuzimisela ngaleyondlela aphumelele. Ngikhuthaza abantu abasha nje ngiphinde ngibakhumbuze ngokubaluleka kokwenza yonke into ngokuzimisela ukuze uzokwazi ukuphumelela,” kubeka yena.
USithole uthe waqala ukucula ngonyaka wezi-2013 kodwa akakaze akhiphe ingoma ayibhalise phansi kube eyakhe.
“Ngiyawuthanda umculo kakhulu. Impilo yami nje ngiphile ngomculo ingako kuyinto enkulu kumina ukuthi senginengoma esizokwazi ukudlalwa nasemisakazweni.Njengoba sengiqalile akuphelele lana ngoba ngizimisele ngokuthi ngikhiphe ezinye izingoma ngaphambi kokuba kuphele unyaka.”
Ingoma kaSithole entsha izotholakala ekhasini lakhe lika-Facebook :Yung Ex kanye nakwi-Internet kulabo abayidingayo..